काठमाडौं नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सन्निकट छ । कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत वडादेखि केन्द्रसम्म नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ । कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा सभापतिपछि प्रभाव राख्ने पद महामन्त्रीमा अहिलेसम्म आठ जनाले उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस विधानमा दुई जना महामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सो दुई पदका लागि पार्टीभित्रका फरकफरक गुटबीच नै प्रतिस्पर्धा […] The post कांग्रेसमा महामन्त्रीका आठ आकांक्षी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
देउवा पक्षद्वारा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेलको उम्मेदवारी
काठमाडौँ- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महामन्त्री पदका लागि प्रदीप पौडेलको उम्मेदवारी निश्चित गरेको छ। महामन्त्री पदका लागि देउवा पक्षले कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका पौडेलको उम्मेदवारी निश्चित गरेको हो। कांग्रेस विधानअनुसार महामन्त्री पदमा दुई जना निर्वाचित हुन्छन्। देउवा पक्षमा महामन्त्रीका आकांक्षी धेरै भए पनि उनले सिटौला पक्षसँगको सहमतिमा पौडेलको उम्मेदवारी टुंग्याएका हुन्। पौडेल अघिल्लो कांग्रेस महाधिवेशनमा […]
काठमाडौं, मंसिर २२ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन पर्सी शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु हुँदै छ । कांग्रेसको १३ पदाधिकारी र १ सय २१ सदस्यसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा १ सय ३४ जना चुन्नका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन हुन लागेको हो । कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, हालका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री […]
कांग्रेस संस्थापन इतरका सभापतिका चार आकांक्षी छलफलमा
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका नेताहरु प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा साझा रणनीति तय गर्न बैठक बसिरहेका छन्। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री सशांक कोइराला र सभापतिका आकांक्षी विमलेन्द्र निधि सहभागी छन्। त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, रामकृष्ण यादव, प्रदीप पौडेल, बलबहादुर केसीलगायत बैठकमा सहभागी छन्। उम्मेदवार […]
काठमाडौँ– पौडेल समूहमा एकमात्र सभापतिको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउन केही दिनमात्र बाँकी रहेका बेला संस्थापन इतर समूहका सभापतिका आकांक्षी नेताहरुबीच सोमबार साँझ छलफल भएको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहाटारमा पौडेल, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाबीच छलफल […]
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सन्निकट छ । कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत वडादेखि केन्द्रसम्म नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ । कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा सभापतिपछि प्रभाव राख्ने पद महामन्त्रीमा अहिलेसम्म आठ जनाले उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस विधानमा दुई जना महामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सो दुई पदका लागि पार्टीभित्रका फरकफरक गुटबीच नै […]
प्रकाशमान र शशांक कोइरालाबीच भेटबार्ता, महाधिवेशन केन्द्रित छलफल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच भेटवार्ता भएको छ । महामन्त्री कोइराला र पूर्वमहामन्त्री सिंहबीच पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित छलफल भएको छ। महामन्त्री कोइराला आज दिउँसो सिंह निवास ठमेलस्थित चाक्सीबारी आएका थिए। उनीहरू दुबै कांग्रेस सभापतिका आकांक्षी छन्। कोइराला र सिंहबीच सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको […]
शशांकको 'खुलासा'– संस्थापनइतरबाट कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवार डा. शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आसन्न १४औं महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहबाट डा. शेखर कोइराला सभापतिको उम्मेदवार हुने संकेत गरेका छन् । शेखरले आफूलाई कन्भिन्स गर्ने र अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने शशांकको भनाइ छ । सोमवार सर्लाहीको हरिवनमा कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्तालाई गरेको सम्बोधनमा महामन्त्री कोइरालाले १४ औं महाधिवेशनमा शेखरलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका हुन् । महामन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एकपटक सभापतिमा लडिसकेको र अर्का आकांक्षी प्रकाशमान सिंहलाई काठमाडौंबाहिर कसैले नचिन्ने टिप्प...
चाक्सीबारीमा जुटे निधि, कोइराला र सिंह
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै सभापतिका आकांक्षी तीन नेताहरु पुनः छलफलमा जुटेका छन् । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच आज पनि छलफल भएको...
कांग्रेस सभापतिका आठ आकांक्षी बैठकमा
काठमाडौँ – आउँदो महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट एउटा मात्रै उम्मेद्वार बनाउन आकांक्षी नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ। बत्तीसपुतलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा नेता अर्जुन नरसिंहकेसीको संयोजनमा सभापति देउवा इतर समूहका सभापतिको एउटै उम्मेद्वार बनाउन छलफलमा जुटेका हुन्। छलफलमा सभापतिको दाबी गरिरहेका आठजना नेताहरुको उपस्थिति रहेको छ। बैठकमा केसीसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान […]